Health Archives - Page3of5- Internet Sansar
October 11, 2019	Health Comments Off on यस्तो अवस्था भएको व्यक्तिले लसुन पटक्कै खानुहुँदैन
लसुनले हाम्रो खानालाई मीठो बनाउन मात्रै होइन, यसमा पाइने धेरै किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाइराख्न पनि धेरै मद्दत गर्दछ। लसुनको नियमित सेवनले स्वास्थ्यमा सुधार आउनेमात्रै होइन, केही खतरनाक शारीरिक समस्या र रोगहरूबाट पनि बचाउन सक्दछ।तर, यदि तपाईँ निम्न ५ किसिमका मानिसहरूमा पर्नुहुन्छ भने, लसुनजस्तो स्वस्थवर्दक कुरा खाँदा विशेष …
October 11, 2019	Health Comments Off on पत्थरीबाट जोगिन नभुलेर गर्नुस् यी ७ काम
मानिसहरुलाई पत्थरीको समस्या आम रुपमा नै हुन्छ । गर्मी मौषममा त पत्थरीका विरामी ४० प्रतिशतले वृद्धी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । पत्थरी हुनुको मुख्यकारण शरीरमा पानीको कमी, तापक्रम, आद्रता लगायत हुन् । नेपालमा लाखौं मानिस पत्थरीबाट पीडित छन् ।यहाँ पत्थरीबाट जोगिनका लागि गर्नु पर्ने ७ कामको चर्चा गरिएको छ ।१ प्रयाप्त …
भुलेर पनि नगर्नुस् १० काम, मिर्गौला खराब हुनसक्छ !
October 11, 2019	Health Comments Off on भुलेर पनि नगर्नुस् १० काम, मिर्गौला खराब हुनसक्छ !
किडनी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ ।यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्तीको चर्चा गरिएको छ जसले मृगौलालाई हानी …
हरियो खुर्सानी खानुका फाइदै फाईदा हेर्नुस ! यस्ता रोग पनि ठीक पार्छ
October 11, 2019	Health Comments Off on हरियो खुर्सानी खानुका फाइदै फाईदा हेर्नुस ! यस्ता रोग पनि ठीक पार्छ
काठमाडौं । खुर्सानी भन्नाले धेरै पिरो मानिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको अध्ययनले खुसार्नी स्वास्थ्यका एकदमै उपयोगी मानिएको देखाएको छ ।हामीमध्ये धेरैजनाले खाना खाने बेलामा पिरो खानेकुरालाई पाखा लगाउने गर्दछौँ । तर के तपाईंलाई थाहा छ ? खानामा कम्तीमा दुईवटा हरियो खुर्सानी खाने गर्नाले क्यान्सर जस्तो भयानक रोगबाट बचाउन सक्छ ।हरियो …
यस्ता लक्षण देखिएमा सावधान ! क्यान्सर हुन सक्छ
October 11, 2019	Health Comments Off on यस्ता लक्षण देखिएमा सावधान ! क्यान्सर हुन सक्छ
एजेन्सी/नयाँदिल्ली । मानव जिवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति उसको शरीर हो । शरीर स्वस्थ भए सबै कुरा त्यो मानवले हासिल गर्न सक्छ । एक अध्ययन अनुसार शरीरमा १३ अप्ठे्रो लक्षण देखिएमा क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।अध्ययनका अनुसार १३ बुँदा एकैसाथ शरीर लागू हुन थाले क्यान्सर हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ । …
कपाल झर्ने १२ कारण यस्ता छन् !
October 11, 2019	Health Comments Off on कपाल झर्ने १२ कारण यस्ता छन् !
शारीरिक तनाव- शल्यक्रिया गरेको अवस्था, दुर्घटना, गम्भीर बिरामी अथवा सामान्य रुघा नै किन नहोस्, कपाल झर्छ । तर, यस्तो अवस्थाको कपाल झराई अस्थायी किसिमको हुन्छ । कपाल झर्ने यस्तो अवस्थालाई ‘टेलागेन इफ्लुभियम’ भनिन्छ । कपालको एउटा निश्चित चक्र हुन्छ : बढ्ने चरण, स्थिर भएर बस्ने चरण र झर्ने चरण । …
थाहा पाउनुहोस् ‘ब्लड सुगर’ कसरी बढ्छ ?
October 11, 2019	Health Comments Off on थाहा पाउनुहोस् ‘ब्लड सुगर’ कसरी बढ्छ ?
काठमाडौं । सुगर मानव शरीरमा एक प्रकारको रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुगर बढु्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । यसकारण संगठनले गाइडलाइन्स जारी गरेको छ ।यो गाइडलाइन्स (सुझाव) मा सुगरको मात्रा बढी हुने समयमा देखिने लक्षणका बारेमा देखाइएको छ । सुगरको खास कारण अस्वस्थता पनि हो । तर …
दिनमा तीनपटक चिया पिउनुस ! यस्तो छ फाइदा
October 11, 2019	Health Comments Off on दिनमा तीनपटक चिया पिउनुस ! यस्तो छ फाइदा
काठमाडौं । के तपाई चिया पिउन मन पराउनुहुन्छ ? यदी हो भने अब तपाइले दिनमा तीन कप चिया पिउन सुरु गरे हुन्छ । यसले तपाईलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउने छ ।एक अध्ययनका अनुसार दिनमा तीन कप चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ । त्यो चिया दुधको किन नहोस । जस्तो सुकै …
October 10, 2019	Health Comments Off on कुन उमेरमा कति घण्टा सुत्ने ?
विभिन्न उमेरका मानिसहरुको निद्राको आवश्यकता फरक–फरक हुने गर्छ। हामीहरु प्रायले आफूलाई पर्याप्त निद्रा नपुगेको सहजै थाहा पाउछौं। तर पर्याप्त निद्रा भनको कति हो त ? अमेरिकाको नेशनल स्लीप फाउण्डेशनले हालै गरेको एक अनुसन्धानले भनेको छ – त्यो तपाईंको उमेरमा भर पर्छ।सुत्ने नियमितताको अभाव, मदिरा, कफी र इनर्जी ड्रिंक्स जस्ता पेय …
October 10, 2019	Health Comments Off on अण्डा किन खाने ?
काठमाडौँ । स्वस्थबर्धक गुणका कारण अण्डा आममानिसबीच निकै लोकप्रिय छ । ब्रेकफास्टमा अण्डा मानिसहरुको पहिलो प्राथमिकता बन्नेगर्छ । अमेरिकी एग बोर्डका अनुसार एक व्यक्तिले वर्षमा २५५ वटा अण्डा खाने गर्छ । यसमा पाइने कोलस्टेरोल मुटुका लागि स्वस्थकर नभएपनि ४० भन्दा बढी अनुसन्धानबाट अण्डा स्वस्थकर खाना भएको पुष्टि भैसकेको छ । …